M/weynaha Guinea Alpha Condé Oo la taliye Imaaraad ah ugu magacaabay xukuumaddiisa. -
HomeWararkaM/weynaha Guinea Alpha Condé Oo la taliye Imaaraad ah ugu magacaabay xukuumaddiisa.
M/weynaha Guinea Alpha Condé Oo la taliye Imaaraad ah ugu magacaabay xukuumaddiisa.
July 5, 2019 F.G Wararka 0
Madaxweynaha Guinea Conakry Alpha Conde ayaa soosaaray go’aan uu Dr Cali Maxamed Khuuri oo u dhashay Imaaraadka ugu magacaabay xilka la taliyaha gaarka ah ee xukuumadda Guinea, go’anka Alpha waxa lagu sheegay in xukuumadda Conakry ay ka faa’iideysaneyso waaya-aragnimada Dr Cali Maxamed Khuuri oo ah la taliyaha golaha midnimada dhaqaalaha carabta sanadkii kaas oo 2018 loo aqoonsaday in uu kamid yahay 100 ka qof ee ugu sarreeysa dhinaca la talinta horumarinta dhaqaalaha.
Dr Cali Maxamed Khuuri iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka socday golaha midnimada dhaqaalaha carabta ee jaamacadda Carabta ayaa dabayaaqadii June-2019 waxa uu gaaray magaalada Conakry ee caasimadda Guinea, iyada oo u magacaabista Khuuri ee xilka la taliyaha xukuumadda Guinea uu salka ku hayo xiriir dhinaca diblomaasiyadda ah oo horraanta sanadka 2019 dhexmaray dowladda Imaaraadka iyo Guinea.
Alpha Conde waxa uu ammaan dadaalka dowladda Imaaraadka Carabta ee horumarinta dhaqaalaha Waddankiisa isaga oo tilmaamay in Guinea iyo Imaaraadku Carabtu ay kawada shaqeynayaan Arrimo dhinaca siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, Conde ayaa ku tilmaamay Imaaraadka Carabta dowlad kaalin wanaagsan ka qaadata hoggaaminta heerka caalami ah.
Raisalwasaaraha Guinea Ibrahima Kassory Fofana iyo wafdiga golaha midnimada dhaqaalaha Carabta ee jaamacadda Carabta ee uu hoggaaminayey Dr Cali Maxamed Khuuri ayaa kala saxiixday is faham kusaabsan dhinaca horumarinta dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka dowliga ah, Raisalwasaaraha Guinea Ibrahima Kassory ayaa ammmaanay jaamacadda Carabta iyo dowladda Imaaraadka isaga oo sheegay in Imaaraadku carabtu uu kaalin weyn uga jiro horumarinta dhaqaalaha adduunka.
Xiriirka Somaliland & Guinea Conakry
Falanqeeyeyaasha Siyaasadda iyo Xiriirka caalamiga ah ayaa tuhunsan in Dowadda Imaaraadku Carabtu ay waddo olole diblomaasiyadeed oo ay cadaadis kusaareyso Soomaaliya kaddib khilaafkii kadhashay ismari-waagii u dhexeeey Khiliijka Carabta oo ay Soomaaliya ka joogsatay kaalin dhexdhexaadnimo.
Imaaraadka ayaa lagu tuhunsan yahay in uu fududeeyey xiriirka ay gobolada Waqooyi (Somaliland) la yeelaneyso waddamo ay kamid yihiin Guinea Conakry iyo Kenya taas oo keentay in Soomaaliya muujiso welwel kusaabsan midnimada iyo madaxbannaanideeda.
Waxaa jiray hadal-hayn kusaabsan in Imaaraadku ku lug lahaa iskahorimaad hubeysan oo Somaliland & Puntland kudhexmaray deegaanka Tukaraq sanadkii 2018.
Siyaasadda Arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo wax xoogaa horumar ah sameysay 10 kii sano ee ugu dambeysay ayaa hadda wejeheysa mashaakil dhinaca xiriirka caalamiga ah iyada oo si gaar ah u la tacaaleysa xiriirka sii xumaanaya ee waddamada Kenya iyo Guinea Conakry.